तपाईंको साथीलाई कडा बनाउनको लागि उत्तम प्रेम पत्र कसरी लेख्ने - सम्बन्ध
तपाईंको साथीलाई कडा बनाउनको लागि उत्तम प्रेम पत्र कसरी लेख्ने
केहि चीजहरूले व्यक्तिलाई न्यानो महसुस गर्दछ र उनीहरूको पार्टनरसँग सम्पर्कमा रहन एक प्रेम पत्र प्राप्त गर्नु भन्दा।
के एक प्रेम पत्र मा जान्छ महत्त्वपूर्ण छ। यो हुनु पर्छ इमान्दार, इमान्दार, असुरक्षित, र दिनको उज्यालोलाई तपाईंको आत्मा देखाउने अनुमति दिनुहोस्, किनकि तिनीहरू त्यहि हो प्रेममा परे पहिलो स्थानमा संग।
तर कसरी तपाईं एक प्रेम पत्र लेख्न को लागी जान्छ? एउटाले दायाँ ताराहरूलाई प्रहार गर्नेछ र तपाईंको प्रेमिका, प्रेमी, वा पार्टनरलाई खुशीको साथ रोइदिन्छ।
यसलाई अधिक विस्तारमा अन्वेषण गरौं।
१. प्रेम पत्र कसरी सुरु गर्ने
हामी मध्ये धेरैलाई चिठी लेख्ने बानी नै छैन, धेरै कम प्रेम अक्षरहरू। यो एक संचार व्यायाम एक पाठ, तत्काल सन्देश, ईमोजी स्ट्रि,, वा विस्तारित कुराकानी सत्र भन्दा धेरै फरक छ।
प्रेम पत्रहरू आफैसँग बढी धैर्यताको आवश्यकता हुन्छ जुन हामीलाई सामान्यतया भनिएको भन्दा सार्थक हो।
सुरू गर्न गाह्रो हुँदैन। राम्रो तरिका भनेको तपाईंले पहिलो पटक भेट्दा कुरा गर्नु हो।
'प्रिय एक्स, जब मैले तपाईंलाई भेटें म…'
तपाईं यो वास्तविक राख्न सक्नुहुन्छ: “… दुईवटा काम गरीरहेको थियो र मेरो काँधमा विश्वको भार महसुस गर्यो। ”
वर्तमान: 'यो अँध्यारो र पानी परेको थियो र तपाईंले चुपचाप त्यो फोहोर बस स्टपमा हामी दुबै माथि आफ्नो छाला झुक्नुभयो।'
कवि '... मासु र कडा हड्डी थियो अब म आत्मा हुँ, एक्लो कहिल्यै।'
फूल '... पहिलो पल्ट, स्वर्गदूतहरू वास्तविक थिए भनेर थाहा थियो, किनकि कि त तपाईं एक हुनुहुन्थ्यो वा कसैले मलाई तपाईंको लागि निर्देशित गरेको थियो।'
त्यसो भए अक्षरले तपाईको व्यक्तिगत ब्रह्माण्डको विस्तार गर्नुपर्दछ। तपाईंले उनीहरूलाई ल्याउनुपर्नेछ, तपाईंको प्रेम, समीकरणमा।
'तपाईंले मेरो जीवनमा प्रवेश गर्नुभयो र मेरो भारी बोकिनुभयो।'
'तपाईं मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथी बन्नुभयो र मलाई चिन्ने व्यक्ति म प्रेम र नैतिक समर्थनको लागि जान सक्छु।'
'तपाईंले मलाई गहिरो र चिरस्थायी प्रेमको खुशी देखाउनुभयो जुन मैले सोचेको कहिल्यै थिएन।'
'तपाईं ... [तपाईको मनबाट इमान्दार शब्दहरू घुसाउनुहोस्]'
वा, तपाईं किन यो लेखिरहनु भएको छोटो छोटो विवरणको साथ तपाईं आफ्नो पत्र सुरू गर्न सक्नुहुनेछ।
कसरी बदसूरत हुनुको साथ सर्तमा आउन
'हामी एक पूरै हप्ता को लागी छुट्टै छौं, र म पक्का छु कि यो सदाको लागि जस्तो लाग्नेछ, त्यसैले म तपाईलाई कत्तिको माया गर्छु भनेर बताउन एउटा पत्र लेख्न चाहान्छु।'
“जब हामी जीवनभरको यो यात्रामा लाग्छौं, मैले महसुस गरें कि म तपाईंलाई कत्ति धेरै ख्याल राख्छु र तपाईंलाई कदर गर्छु भनेर सम्झाउनको लागि यो समय उपयुक्त हुनेछ। त्यसैले यहाँ जान्छ ... '
'यो पत्र तपाईको अद्भुत व्यक्ति तपाईलाई देखाउने मेरो तरिका मात्र हो।'
अर्को, कसरी प्रेम यात्रा मा चिन्तन। यो कहाँ ले तपाइँ दुई लाई लिएको छ? यसले तिमीलाई अर्को कहाँ लगिरहेको छ? यसको बारेमा लेख्नुहोस्।
'यी बितेका X बर्षहरु मेरो जीवनको सब भन्दा राम्रो भएको छ र म जीवनले हामीलाई पछि कहिँ ले जान्छु भनेर म पर्खन सक्दिन।'
'हामी केहि महाकाव्य कारनामहरुमा सँगै आएका छौं र तपाईले मलाई एक राम्रो व्यक्ति बन्नको लागि धकेल्नु भएको छ। म आशा गर्दछु कि मैले पनि तपाईंको लागि यही गरें। ”
'हामीले साझेदारी गरेको समयहरू, हामी यात्रामा आएका थियौं, अनुभवहरू हामीसँग छ - म अझ बढी सोध्न सक्दिन। यदि भविष्यले हामीलाई विगतको भन्दा आधा भन्दा बढी ल्याउँछ भने, म एक धेरै खुसी र सामग्री व्यक्ति हुँ। '
'हामी कस्तो यात्रामा गयौं। ती पहिलो मितिहरू सँगै एक घर बनाउन, हाम्रा अद्भुत बच्चाहरूसँग मैले यसका प्रत्येक सेकेन्डलाई माया गरेको छु। मलाई पक्का विश्वास छ हाम्रो अगाडीको बाटो उही समान रमाईलो र इनामदायी हुनेछ।
सकेसम्म विशिष्ट प्राप्त गर्नुहोस्। तपाईंले अस्ट्रेलियामा गरेको प्याडल बोर्डिंगको उल्लेख गर्नुहोस्, त्यस समयमा तपाईंले फ्लैट-प्याक वार्डरोब सँगै पछाडि राख्नुभयो र स्क्र्याचबाट सुरु गर्नुपर्‍यो, जब तपाईंको पहिलो बच्चाको जन्म भयो, तब तपाईंले छालामा सूर्यास्तमा नजिकैको तालमा गरेको पातलो डुबाइदिनुभयो।
तपाईं जानुभएको यात्रा गहन व्यक्तिगत हो, त्यसैले तपाईंको प्रेम पत्रले यसलाई प्रतिबिम्बित गर्नुहोस्। विगतका कथाहरू सम्झनुहोस् र भविष्यको लागि तपाईंको सपनाहरूको बारेमा बोल्नुहोस्।
रम्बलिंगको बारेमा चिन्ता नलिनुहोस् यदि यो तपाईंको लागि अर्थ हो भने, यो तिनीहरूको लागि केही अर्थ हो।
२. ध्यान प्राप्त गर्नेतिर फर्काउनुहोस्
एकचोटि तपाईंले आफ्नो प्रवाह फेला पार्नुभयो भने, तपाईंको अर्को शब्दहरू ती हुन् कि केवल एक व्यक्तिको रूपमा तपाईं कति कदर गर्नुहुन्छ र मूल्या value्कन गर्नुहुन्छ।
तपाईं कसरी ध्यान दिन सक्नुहुन्छ तपाईंको प्रेमीले तपाईंलाई मात्र परिवर्तन गर्दैन, तर उनीहरूको वरपरको विश्व पनि:
“मलाई यस्तो उदार र अरूलाई दिने कुरा मलाई कहिले पनि थाहा छैन।”
एउटा केटा मात्र सेक्स चाहन्छ भन्ने संकेत गर्दछ
'तपाईंले मानिसहरूलाई शान्तिमय र सद्भावसँगै ल्याउने तरिका साँचो उपहार हो।'
'प्रकृतिका सबै प्राणीलाई तपाईले ख्याल गर्ने हेरचाह र ध्यान केवल सुन्दर छ।'
तपाइँ उनीहरूको लागि यती अनौंठो र विशेष बनाउने कुराको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ:
'तपाईले मलाई हरेक दिन मोह गर्नुहुन्छ, युएफओको बारेमा कुरा गर्नदेखि लिएर जंगली मैदानमा कुन बोटबिरुवाहरू औषधी हुन् भनेर जान्न।'
'क्राफ्टि forको लागि तपाईंको उत्कटता देख्न पाउँदा आनन्द लाग्दछ र म तपाईंको रचनात्मकता र प्रत्येक टुक्रालाई जति सक्दो राम्रो बनाउन कटिबद्धता मनपर्दछु। '
'जब तपाईं पियानो बजाउनुहुन्छ, यो यस्तो लाग्छ कि म तपाईंको हृदयले महसुस गरिरहेको छु।'
तपाईं तिनीहरू मा भएका यात्राहरू वा अझै जारी रहेका दिनहरू स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ:
'मैले कसैलाई इमान्दारीपूर्वक आफूलाई क्वान्टम फिजिक्स पढाउने कोसिस गरेको कहिल्यै देखेको छैन, र तपाईले भनेको कुराको 90 ०% अर्थ के हो भनेर मलाई केही पनि थाहा छैन भने पनि मलाई आशा छ कि तपाईले यी आकर्षणहरु मलाई बोध गर्न कहिल्यै छोड्नु भएन।'
“तपाईको हृदय र आत्मालाई तपाईको व्यवसायमा लगाईएको हेर्नु अविश्वसनीय भएको छ। ती कठिन प्रारम्भिक वर्षहरू मार्फत जुन तपाईंले अहिले सामना गर्नु भएको चुनौतीहरूको सामना गर्न, म आश्चर्यमा उभिन्छु कि तपाईंले यसलाई यत्तिको सफल कसरी बनाउनु भएको छ। ”
'तपाईंले पहिलो पटक म्याराथनको लागि प्रशिक्षण गर्ने निर्णय गर्नुभएकै क्षणदेखि नै मलाई थाहा थियो तपाईंले यसमा आफ्नो सबै राख्नु भयो। र अब तपाईं म्याराथन नम्बर पाँच लाई सम्हाल्दै हुनुहुन्छ जुन एक अविश्वसनीय उपलब्धि हो। म सँधै तपाईलाई खुशी बनाउनेछु र अन्तिम रेखामा तपाइँको लागि कुर्दै छु। '
(नोट: ‘यद्यपि यी उदाहरणहरूले रोमान्टिक प्रेममा ध्यान केन्द्रित गर्दछन्, तिनीहरू सबै पारिवारिक लागि वा कार्य गर्दछन् प्लेटोनेटिक प्रेम साथै। जबसम्म र एक साकी बिट्सको समावेश गर्नमा पुग्दैन।)
तपाईं प्रेम को बाहेक अरू कुराहरुको कुरा गर्न र गर्नु पर्छ।
कसरी उनीहरू तपाईंलाई हाँस्न बनाउन को लागी कुरा गर्नुहोस्। वा कसरी अरू कसैले उनीहरूले कहिल्यै प्रयास गर्न प्राप्त गरेनन्, एक्लै कदर गर्नुहोस्, ब्रसेल्स स्प्राउट्स।
हल्क होगन अब के गर्दैछ
उनीहरूको लागि तपाईंको प्रशंसाको कुरा गर्नुहोस् वा तिनीहरूको क्षमता तपाईं र सबैले छुनुहोस् उत्तम बाहिर लेराउन।
आफूले माया गरेको मान्छेमा तपाईले के अधिक मूल्य दिनुहुन्छ भन्ने बारे तपाईलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ, तर यदि विचारहरु तुरुन्तै आउँदैनन् भने ठूला र साना - सबै कुराको एक सूचीलाई मंथन गर्ने कोशिश गर्नुहोस्।
यदि समय तपाइँको पक्षमा छ भने, यस सूचीलाई थप्न जारी राख्नुहोस् र जब तपाइँ याद गर्नुहुन्छ वा उनीहरूको बारेमा केहि याद गर्नुहुन्छ जसले तपाइँको मुटु थोरैमा पग्लन्छ। त्यसोभए, जब तपाईं आफ्नो प्रेम पत्र लेख्न आउनुहुन्छ, तपाईंसँग काम गर्न प्रशस्त मात्रामा सामग्री हुनेछ।
१० चीजहरू प्रत्येक महिलालाई सम्बन्धमा महसुस गराउन चाहन्छ
बिना शर्त प्रेमको सही अर्थ
प्रमाण जुन तपाईं आफ्नो लाइफटाइममा एक भन्दा बढी सोलमेट पाउन सक्नुहुन्छ
प्रेमबाट खस्नु: उनीहरूको लागि तपाईंको भावनाहरू हराउँदैछ भनेर Sign संकेतहरू
मैले प्रेम खोज्न छोडेँ र यो आयो र पछि मलाई बिट पार
एक सम्बन्धमा जब 'म तपाईंलाई माया गर्छु' भन्न सही समय कहिले हो?
१ Re कारण किन म तपाईंलाई माया गर्छु
It. यो तपाइँलाई फिर्ता ल्याउनुहोस्
अब जब तपाईं तिनीहरूलाई प्रकाश मा राख्नु भएको केहि समय खर्च गर्नुभयो, तपाईं ध्यान तपाईं लाई फिर्ता ल्याउन सक्नुहुन्छ, तर विशेष गरी कसरी तिनीहरूले तपाईंलाई अझ राम्रो व्यक्ति बनाए।
उनीहरूले तपाईंलाई बढाउन मद्दत गरेको तरिकाहरूको बारेमा कुरा गर्नुहोस्:
'मलाई थाहा छ म पहिलो पटक भेट हुँदा म एक बन्द पुस्तक को एक बिट हुन सक्छ, तर तपाईं मलाई देखाउनुभयो यो मेरो भन्दा अधिक साझा गर्न कत्ति सुन्दर हुन सक्छ मलाई र कमजोर हुन । यसको लागि म तपाईलाई साच्चै धन्यवाद दिन्छु।
'जब तपाईं मेरो जीवनमा देखा पर्नुभयो म एक चिन्ताजनक गडबडी भएको थियौं, तर तपाईंको सहयोग र सहयोगको साथ, म अब धेरै शान्त र बढी विश्वस्त छु। यो सबै कुरा हो जुन तपाईं ममा विश्वास गर्नुहुन्छ र मलाई आफैंमा विश्वास गर्न सिकाउनुहुन्छ। म तपाईलाई कत्ति धेरै धन्यवाद दिन सक्दिन
“जब मैले मेरो जीवनमा चुनौतीहरू र अवरोधहरूको सामना गरें, तपाईंले मलाई तिनीहरूबाट टाढा हुन प्रोत्साहन दिइरहनुभयो। तपाईंले मलाई अग्लो भएर खडा हुन र कठिन समय पार गर्न यथासक्दो गर्न बताउनुभयो, र मैले गरें ... किनकि मलाई थाहा थियो तपाईं पूरै समय मेरो छेउमा हुनुहुन्छ। ”
तपाईंले सम्भवतः धेरै तरीकाले परिवर्तन गर्नुभयो जुन तपाईले पहिलो पटक आफ्नो प्रियलाई भेट्नुभयो, सोच्नुहोस् कि कसरी ती ती सकारात्मक परिवर्तनहरूमा भूमिका खेलेका छन्।
उनीहरूले तपाइँ र तपाइँको जीवनमा कसरी सुधार गरे भनेर बताएर, यसले तिनीहरूलाई देखाउँछ कि तपाइँ त्यसमा उनीहरूको उपस्थितिको साँच्चिकै कदर गर्नुहुन्छ।
Ter. पत्र समाप्त हुँदै
तपाईंको पत्र समाप्त गर्नका लागि, तपाईले प्राप्तकर्ताको लागि महसुस गर्नुहुने भावनाहरूमा फर्कनुहोस् र स्पष्ट पार्नुहोस् कि यी भावनाहरू पहिले जत्तिकै बलियो छन्।
पुन: धन्यबाद र दोहोर्याउनुहोस् कि तपाईं भविष्यमा जे पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ को लागी प्रतिक्षा गर्दै हुनुहुन्छ।
यद्यपि यो आवश्यक छैन, पी.एस. तपाईंले आफ्नो नाममा हस्ताक्षर गरेपछि राम्रो चीज हुन सक्छ कि केहि शीर्ष चीजहरूमा हास्यास्पद वा मिश्री थप्नको लागि र उनीहरूको आँसु बगाउन।
केहि जस्तै ...
“पी.एस. तपाईंसँग टबबाट जहिले अन्तिम चम्चा आइसक्रीम हुन सक्छ। ”
“पी.एस. म तिमीलाई बिहान एक कप कफी लिएर आउँदछु जब सम्म हामी दुबै बूढा र झिम्क्याउँदैनौं। '
“पी.एस. तपाईं अझै पनी मेरो पहिलो मितिमा मेरो बर्गरको विशाल काटनेको लागि मेरो !णी हुनुहुन्छ! :) '
एक प्रेम पत्र पछाडि जान
सायद तपाईले रचनात्मक महसुस गरिरहनु भएको छ, वा हुनसक्छ यो तपाईको पहिलो प्रेम पत्र होइन र तपाई केही विशेष गर्न चाहानुहुन्छ। तपाईंको चिठी अक्षर हुनुपर्दैन। यो कविता हुन सक्छ। यो कथा हुन सक्छ। एउटा भिग्नेट एक गीत यदि तपाईं संगीतमा झुकाव हुनुहुन्छ भने।
तपाईले सम्बन्ध सम्बन्धमा माइलस्टोन्स र टर्नि points पोइन्टहरूको बारेमा दृश्य कोलाज गर्न सक्नुहुन्छ प्रतीकात्मक अर्थले भरिएको मैनबत्ती सिर्जना गर्नुहोस् र दुवैले एकान्त हिड्ने क्रममा अवलोकन रेकर्ड गर्नुभयो जहाँ तपाईको प्रियजनको अदृष्य तर महसुस तपाईको उपस्थिति पूरै बाटोमा रहिरह्यो। ।
तपाइँले यस बिन्दुमा जे पनि गर्नुहुन्छ, बुझ्नुहोस् कि आउटपुट सम्भवतः साम्प्रदायिक बीचमा यति अनौंठो, सामर्थ्यशाली, र निजी हुनसक्दछ, त्यो कुरूप रोइरहेको हुन सक्छ। तपाईंको दुबै भागहरूमा।
के एक प्रेम पत्र कुराकानी गर्न आवश्यक छ
अब तपाईले बुझ्नुभयो कि एक राम्रो प्रेम पत्र हो हैन कसैको चम्किने गुणहरूको लुगा धुने सुची। यो एक नजिकको विवरण हो जो तपाईं अर्को व्यक्तिको जीवनको प्रभावमा हुनुहुन्छ।
यो छोटो र आश्चर्यजनक हुन सक्छ जस्तै 'मलाई तपाईंलाई चाहिन्छ' रुमालमा लेखिएको छ र उनीहरूको टेबलको छेउमा स्लाइड भएको छ तिनीहरू आफैंले एउटा रेस्टुरेन्टको बाथरूममा माफी दिए पछि वा दुई आइतवारसम्म उनीहरूको लागि कुर्दै अन्त हुने गरी। टाढाको यात्राबाट फर्कनुहोस्।
जुनसुकै लम्बाइ वा फाराम, यसले तपाईलाई कागजातलाई कामुक कलाकृतिको रूपमा बदल्न यति नग्न राख्नु पर्छ।
याद राख्नुहोस्, कहिलेकाँही यो तपाईको कुरा हो वा कसरी भन्छु भन्ने होईन, यो हो कि तपाईले यो भनेको हो।
त्यसोभए प्रियजनको बारेमा सोच्नुहोस्।
कसरी आफ्नो पति संग प्राप्त गर्न को लागी कडा खेल्न को लागी
चर्चको सेवाको क्रममा तपाईले हाँस्न सक्ने किसिमको विचारहरू सोच्नुहोस्।
कसरी तपाईंको दिनको बारेमा सोच्नुहोस् - यदि त्यसले उत्तम रूपमा पूर्ण रूपले गइरहेको छ भने - उनीहरू घर भएको क्षणको लागि अत्यन्त उत्तम हुन्छ।
तिनीहरूको अभिव्यक्तिलाई विचार गर्नुहोस् जब उनीहरू विचारशील हुन्छन् तपाईंलाई धन्यका कति सुरक्षित र माया गरिएको छ भनेर आशीर्वाद दिनुहोस्।
यदि तपाईं यी सबको साथ आफैं फुट्नको लागि भर्न सक्नुहुन्छ, प्रिय प्रियहरू, तपाईं एक प्रेम पत्र लेख्न सक्नुहुन्छ जुन उनीहरूलाई खुशीको आँसुले रोएको छ।
तपाईंसँग शब्दहरूको साथ मार्ग हुनु आवश्यक छैन। तपाईंले भर्खरै यो जान्नु आवश्यक छ कि तपाईं कसैलाई को लागी माया गर्नुहुन्छ, र लेख्नुहोस्।
किनभने यदि तपाईं आफ्नो जीवनको कुनै विन्दुमा पुग्नुभयो जहाँ तपाईं भावनालाई कब्जा गर्न बाध्य हुनुभयो 'म तिमीलाई माया गर्छु, ताराले आगो उठाएदेखि नै तपाईंलाई माया गरेको छ, जब हामी तिनीहरूको कोइला पन्छाउँछौं तपाईंलाई प्रेम गर्दछौं' - तपाईं, मेरो मित्र, साँच्चै राम्रो ठाउँमा छन्।
एक उदाहरण प्रेम पत्र
मेरो एक र मात्र पैसालाई,
हामी सँगै बढ्न लाग्यौं र म धेरै उत्साहित छु। म त्यो उत्साह तपाईंसँग बाँड्न चाहान्छु र त्यसैले मैले यो पत्र तपाईंलाई लेखे।
हामीले भेटेको रात तारामा लेखिएको देखिन्थ्यो। म अरु कतै हुन चाहेको थिएँ र तपाईले एक रातमा योजना बनाउनु भएको थियो जब सम्म तपाईको साथीले तपाईलाई मन नलागेको थियो। कुनै पनि रातमा, हामी एक अर्कामा टक्कर मार्ने थिएनौं।
तर हामीले गरेको एक अर्कामा टक्कर। यद्यपि यो एक बर्ष भन्दा अघि भएको थियो, म अझै पनी सम्झना गर्दछु जब मेरो आँखाले तपाइँलाई भेट्यो जब तपाईं र तपाईंको साथीहरू मेरो छेउमा टेबलमा बस्छन्।
त्यो भाग्यशाली रात देखि धेरै भयो र यो रमाईलो र रमाईलोको एक आँधी हो। मलाई लाग्दैन कि म कहिले मुस्कुराएको छु र हँसेको छु जस्तो म तपाईंको साथमा हुँदा। तपाईंले मलाई जीवनमा के देखाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईंसँग अपराधमा एक साँचो साझेदार छ यसको साथ खर्च गर्न।
यदि हाम्रो अर्को साहसिक राम्रो को रूप मा कहीं पनि छ, हामी अगाडी हेर्न को लागी धेरै छ। र म तपाईंलाई अहिले भन्दा बढि राम्ररी चिन्ने आशा गर्छु।
तपाईंको बारेमा धेरै कुरा छन् जुन मेरो हृदयलाई उज्यालो बनाउँदछ। धेरै शब्दहरू वास्तवमा राख्नको लागि। मँ जीवनमा तपाईको आशावादी दृष्टिकोण र तपाई हरेक नयाँ दिनमा ल्याउने उर्जा लाई मन पराउँछु। मलाई सँधै सजिलो नहुँदा पनि चीजहरू हेर्ने संकल्प मनपर्छ। तपाइँ नयाँ चीजहरू जान्न र तपाइँको सिमानाहरू धक्का दिन चाहानुहुन्छ भन्ने तरिका मलाई मनपर्दछ।
छोटो समयमा पनि मैले तपाईंलाई चिनेको छु, मैले तपाईंलाई केही अचम्मका कामहरू गरेको देखेको छु। तपाईंले कार्यको पूर्ण भिन्न क्षेत्रमा जानको चुनौतीलाई स्वीकार गर्नुभयो किनभने यो त्यस्तो चीज हो जुन तपाईंले जुनसुकै भावशून्य महसुस गर्नुभयो। र तपाईंले यसलाई सहजै देख्नुभयो, मलाई थाहा छ तपाईंले यसमा कति राख्नु भयो।
कसरी बताउने यदि एक पुरुष सहकर्मी तपाइँलाई मनपर्छ
तर त्यो केवल तपाईं मात्र हुनुहुन्छ ... एक कडा परिश्रमशील, दृढ इच्छाशक्ति, सकारात्मक मानव जसले जीवनलाई स्क्वाडेर नहुने अवसरको रूपमा हेर्दछ।
र यस जीवनशैलीले मलाई पनि बन्द गरी दियो। मेरो जीवनमा तपाईको सरासर उपस्थिति र तपाईले बताउनुभएको कुराको लागि तपाईले देखाएको उत्साहले मलाई मेरो सपनाको अनुसरण गर्न र मेरो मार्गमा खडा हुने अवरोधहरूको सामना गर्न बढी प्रेरित गरेको छ।
यदि म तपाईलाई कहिल्यै नभेटेको भए म त्यस्तो व्यक्ति हुने थिइनँ र त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईंले मलाई ब्रॉडवे म्यूजिकलको जादूको कदर गर्न पनि पाउनुभयो, मेरा शुरुआती आरक्षणहरू बावजुद। हामी फेरि लेस मिस कहिले देख्ने छौं? गम्भीरतापूर्वक!
जब हामी हाम्रो नयाँ स्थानको कुञ्जीमा हाम्रो हातहरू प्राप्त गर्दछौं, म तपाईंलाई चाहन्छु कि तपाईंले मेरो मुटुको साँचो पाउनुभयो। शीश, त्यो हँसिलो लाग्दछ, तर यो सत्य हो। म वास्तवमै तपाईंलाई माया गर्छु र भविष्यमा के हुन्छ भनेर म प्रतीक्षा गर्न सक्दिन।
पी.एस. म कम्तिमा ward०% वार्डरोबमा डिबहरू कल गर्छु ... ठिक छ, %०% ... यथार्थपरक होऔं र २ 25% बनाउनु पर्छ कि?
अझै पक्का छैन कि तपाइँको प्रेम पत्रमा के लेख्ने? रिलेशनशिप हीरोको सम्बन्ध विशेषज्ञसँग अनलाइन कुराकानी गर्नुहोस् जसले तपाईंलाई चीजहरू पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ। केवल
एजे शैली शाही रम्बल 2016
जब तपाइँ कसैको प्रेममा पर्नुहुन्छ
प्रेम र सेक्स बनाउन के फरक छ
कसरी थाहा छ कि मेरो पूर्व मलाई फिर्ता चाहान्छ
तपाइँको आफ्नै कार्यहरु को लागी जिम्मेवार हुनु